“Tsy efa fotoana ve tokony hihaonantsika anaty fitoviana ?” · Global Voices teny Malagasy
Fanentanana tsy voasaina tsara ka vao mainka manamafy ireo fitsaratsarampoana
Nandika (en) i Jonathan Karstadt
Voadika ny 13 Jona 2019 18:50 GMT
Vakio amin'ny teny English, Deutsch
Io no fanontaniana napetrak'i Katrin Zinoun, toniandahatsoratry ny Global Voices no sady mpanoratra miasa tena, mpandika lahatsoratra ary mpanao velakevitra, tao anaty lahatsoratra am-bilaogy iray tany amin'ny faramparan'ny volana Jona.
Nanodidina ny “Dein Tag für Afrika” (Ny andro omenao an'i Afrika) ny fanontaniany, fanentanana iray isantaona karakarain'ny ONG Alemana Aktion Tagwerk manerana ny firenena. Amina andro iray, mandeha miasa ireo ankizy mpianatra mandray anjara amin'izany, fa tsy mandeha any an-tsekoly, ary manolotra ny karama kely azony ho an'ireo tetikasam-panabeazana any amin'ireo firenena Afrikàna. Araka ny ambaran'ireo mpikarakara, ankizy 181.000 avy amina sekoly 618 no nandray anjara ho an'ny taona 2015.
Rehefa alalinina ilay lahatsary fanentanana, lazain'i Katrin fa vao mainka manamafy ireo fitsaratsarampoana ilay izy raha nantenaina mba hampisaintsaina momba azy ireny. Tsy hita fototra akory aza ny fampitan-kafatra, ary ilay fanentanana tsy nanome akory fahafahana mametraka tambajotra iarahana amin'ireo tanora ao Afrika, raha ny hitany.
Miaraka amin'ìreo fanamarihana ireo, ampiahatsiahivinì'i Katrin antsika ny iraka tontosain'ny Global Voices‘ . Matetika isika no manoratra momba ireo olona izay atao an-jorombala, saingy diso ny finoantsika hoe afaka miteny amin'ny toeran'izy ireny isika. Ny tokony atao, mihaona amin'izy ireny amim-pitiavana sy fahatsorana, mihaino an-dry zareo ary mamela azy ireny hilaza ny tantarany manokana sy hametraka ny fandaharam-potoanany manokana. Aorian'izay monja ity “fitaovam-pifandraisana maoderina” ity, raha ny marina, vao afaka hitàna anjara toerana goavana, araka izay iantsoan'ny Aktion Tagwerk an'ilay fanentanana,